- Fizarana 3
Ahoana ny fanatsarana ny solubility ny loko asidra
Ny loko misy asidra, ny loko mivantana ary ny loko reaktifa dia loko mandoko amin'ny rano rehetra. Ny vokatra tamin'ny 2001 dia 30.000 taonina, 20.000 taonina ary 45.000 taonina. Na izany aza, nandritra ny fotoana ela, ireo orinasan-doko vita amin'ny fireneko dia nandinika bebe kokoa ny fivoarana sy ny fikarohana ireo loko vaovao mifototra, wh ...
Niakatra be ny mpitatitra entana! Ho avy ny tafio-drivotra! Alefaso aloha azafady!
Cliff mangatsiatsiaka, ho avy izy! Ny nomerao farany amin'ny fandrarana mampidi-doza any amin'ny faritany! Niakatra ny vidin'ny fitaterana, navoaka ny famantarana fampitandremana! Ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fampitandremana onja mangatsiaka! Maherin'ny 80% ny firenena no mety ho voatazona! Ny 28 desambra lasa teo, namoaka ny ivon-toeran'ny Météoologique National ...
Raiso ity fika kely ity! Ahoana ny fomba hifehezana ny fahamendrehan'ny fizotran'ny fandokoana
Rehefa mandoko, alohan'ny hidiran'ny lamba amin'ny tanky, sokafy aloha ny valizy miditra amin'ny rano amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso hiditra ao anaty rano. Ity fidiran-drano ity dia fehezin'ny rafitra fanaraha-maso herinaratra amin'ny alàlan'ny haavon'ny ranoka efa voatondro. Rehefa mahatratra ny haavon'ny rano napetraka ny fidiran'ny rano, ny rano ...
Folo, mpanelanelana amin'ny loko —Mit-ivy Industry co., Ltd
Whatsapp / wechat: +86 13805212761 https://www.mit-ivy.com orinasa orinasa mit-ivy CEO@mit-ivy.com hi, ity no CEO athena avy amin'ny indostria mit-ivy ho an'ny simika any Sina. Orinasa famokarana simika biolojika Jiangsu (ao anatin'izany ny loko), mifanaraka amin'ny filany, ny famokarana ary ny loko (anisan'izany ny pe ...
Tsy misy fanantenana intsony ny hamerenana ny famokarana? Indostria dyestuff (mpanelanelana amin'ny dyestuff) na hiteraka hatairana Whatsapp / wechat: +86 13805212761
Whatsapp / wechat: +86 13805212761 https://www.mit-ivy.com orinasa orinasa mit-ivy CEO@mit-ivy.com hi, ity no CEO athena avy amin'ny indostria mit-ivy ho an'ny simika any Sina. Tao anatin'ny roa andro lasa izay, nisy vaovao iray naverina navoaka tamin'ny Internet: “Ny Governemantan'ny Vondrom-paritany Jiangsu eo amorontsiraka ...
Fahafantarana ny mpanelanelana amin'ny sehatry ny loko - Indostria mit-ivy
Whatsapp / wechat: +86 13805212761 https://www.mit-ivy.com orinasa orinasa mit-ivy CEO@mit-ivy.com hi, ity no CEO athena avy amin'ny indostria mit-ivy ho an'ny simika any Sina. Fampidirana Dyeing (loko) mpanelanelana dia sampana lehibe amin'ny indostrian'ny simika tsara, ary ny developm haingana ...
Ny loko faribolana dia nanolotra fanangonana, fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny mpanelanelana amin'ny dyestuff (sokajy rehetra) –MIT-IVY Athena
Whatsapp / wechat: +86 13805212761 https://www.mit-ivy.com orinasa orinasa mit-ivy CEO@mit-ivy.com hi, ity no CEO athena avy amin'ny indostria mit-ivy ho an'ny simika any Sina. Mpanelanelana: ny mpanelanelana Dyestuff dia sampana tena lehibe amin'ny indostrian'ny simika tsara sy ny fampandrosoana haingana ...
Mametra ny filaminana! Faritra lehibe amin'ny fahatapahan'ny herinaratra any amin'ny faritany! Niakatra hatramin'ny 1066 yuan / taonina ny akora!
Tampoka teo dia olona 80 tapitrisa no namaky ilay lohahevitra, ary an'arivony ireo mpiserasera nandray anjara tamin'ilay dinika. Nilaza izy ireo fa tapaka tampoka ny herinaratra, na ny Internet sy ny telefaona finday aza tena nalemy, tapaka ny sasany tamin'ireo tambajotra, ary ny ascenseur sy ny jiro c ...
Taitra! Tetik'asa glycolan'ny etilena 300 000 taonina no lavanty, nanomboka tamin'ny 1,9 miliara!
Ny lapan'ny olona antonony Tongliao dia hanao lavanty ampahibemaso amin'ny sehatra lavanty Ali an'ny Fitsarana Anelanelan'ny olona manelanelana an'i Tongliao manomboka amin'ny 10:00 ny 4 Novambra 2020 ka hatramin'ny 10:00 amin'ny 3 Janoary 2021 (afa-tsy ny fanemorana). 300.000 taonina ny lasibatra. Fananana hafa ankoatry ny fananana ankehitriny ...
Misy ny vokatra vaovao ~
Izahay dia nanamboatra vokatra vitsivitsy izay nanontaniana nandritra ny fotoana ela ~~~ inter Mpanelanelana loko fandoko simika vaovao 14, andao jerena raha misy mety aminao ~~~！ 1.N-Phenyldiethanolamine 120-07- 0 Kristaly mavo somary mavo, ampiasaina ho mpanelanelana amin'ny loko. 2.p-Toluidine PT 106-49-0 ...
Tampoka! Maty ny telo ary efatra naratra vokatry ny fipoahana tao amin'ny Factory Chemical! Taitra ny tsena, tafakatra 1000 yuan / taonina ny akora!
Nisy fipoahana goavana teo amin'ny sehatry ny simika tamin'ny faran'ny herinandro teo. Firenena im-betsaka amin'ny fizahana toerana, saingy tsy hitany tanteraka ny olana miafin'ny orinasa, nipoaka! Nipoaka ny zana-kazo Tanner! Telo maty ary efatra naratra! Raha ny fampitam-baovao dia olona telo no maty ary efatra izahay ...
Fihaonamben'ny indostria simika iraisam-pirenena momba ny simika iraisam-pirenena China Zibo 2020 ary fampirantiana "efatra vaovao" no haseho
Tamin'ny 16 Desambra 2020, notohanan'ny China Fluorosilicon Organic Materials Industrial Association, Governemanta Huantai County People, China Epoxy Resin Industry Association (nomanina), Beijing Fluorosilicon Technology Development Co., Ltd., Beijing Guohua New Technology Technology Center, Dongfang Un .. .
<< <Teo aloha 123456 Manaraka> >> Pejy 3/11